Little Bird (2021) | MM Movie Store
လူတိုငျးမှာအနညျးဆုံးတော့ဖွဈခငျြတဲ့ ဆန်ဒလေးတှေ တဈခုစီရှိကွပါတယျ။ဆန်ဒတှေ ဖွဈမွောကျလာဖို့ လူတဈယောကျရဲ့ ဘဝတဈဆဈခြိုးအခြိနျတဈခုကတော့“တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ စာမေးပှဲ” ဖွတေဲ့အခြိနျပါပဲ။ဒီဇာတျလမျးမှာတော့ ကိုရီးယားရဲ့ တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ ဖွဆေိုပုံကိုဇာတျလမျးသဘောနဲ့နှောပွီး မွငျရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Cast အနနေဲ့ Lee Ki-hyuk ကအဓိက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ …..တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ ပွနျလညျ ဖွဆေိုရတဲ့ ညီအဈကိုနှဈယောကျအကွောငျးပါပဲ။နယျကနတေကျလာတဲ့ ညီအကို နှဈယောကျဟာသငျတနျးမှာ ကွေးရတကျသမီးဂဈြကနျကနျကောငျမလေးတဈယောကျနဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။
သူနဲ့ အကိုကွီးဖွဈသူကွားမှာ အခဈြဇာတျလမျးတဈပုဒျ ဖွဈပျေါလာခဲ့ပမေယျ့.သူက အမှုစဈသမီးဖွဈပွီးတော့ နယျက ညီအဈကို နှဈယောကျကသာမနျလူတနျးစားဖွဈနတေော့ အခွအေနတှေကေ ကှာခွားလှနျးလှပါတယျ။
မိုးနဲ့မွေ ဖွဈနတေဲ့ အခဈြရေးက အဆငျပွပေါ့မလား?????အခဈြကို ဦးစားမပေးနိုငျတဲ့ အကိုကွီး ဖွဈသူရဲ့ အခကျအခဲအကိုကွီး အဖအရာ ဘဝကို ရုနျးကနျနရေပုံကိုလကျတှဘေ့ဝနဲ့ အနီးစပျဆုံး ရိုကျကူး ပွသထားပွီးသငျခနျးစာယူစရာတှလေညျး အမြားကွီးရနိုငျတဲ့ ကားကောငျးလေးတဈကားဆိုတာ ညှနျးခငျြပါတယျ။
လူတိုင်းမှာအနည်းဆုံးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတွေ တစ်ခုစီရှိကြပါတယ်။ဆန္ဒတွေ ဖြစ်မြောက်လာဖို့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးအချိန်တစ်ခုကတော့“တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ” ဖြေတဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ ကိုရီးယားရဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ဖြေဆိုပုံကိုဇာတ်လမ်းသဘောနဲ့နှောပြီး မြင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Cast အနေနဲ့ Lee Ki-hyuk ကအဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ …..တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ပြန်လည် ဖြေဆိုရတဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းပါပဲ။နယ်ကနေတက်လာတဲ့ ညီအကို နှစ်ယောက်ဟာသင်တန်းမှာ ကြေးရတက်သမီးဂျစ်ကန်ကန်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
သူနဲ့ အကိုကြီးဖြစ်သူကြားမှာ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပေမယ့်.သူက အမှုစစ်သမီးဖြစ်ပြီးတော့ နယ်က ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ကသာမန်လူတန်းစားဖြစ်နေတော့ အခြေအနေတွေက ကွာခြားလွန်းလှပါတယ်။
မိုးနဲ့မြေ ဖြစ်နေတဲ့ အချစ်ရေးက အဆင်ပြေပါ့မလား?????အချစ်ကို ဦးစားမပေးနိုင်တဲ့ အကိုကြီး ဖြစ်သူရဲ့ အခက်အခဲအကိုကြီး အဖအရာ ဘဝကို ရုန်းကန်နေရပုံကိုလက်တွေ့ဘဝနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ရိုက်ကူး ပြသထားပြီးသင်ခန်းစာယူစရာတွေလည်း အများကြီးရနိုင်တဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားဆိုတာ ညွှန်းချင်ပါတယ်။
The Temptation of Kimono – Link 2
The Good Doctor (Season 2) ၊အပိုငျး (၃)